မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: ကျွန်တော် တွေးမိသော ဘာဝသဘောတရားများ
ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀ခရီးကို ဖြတ်သန်းရမလား၊ ချောမွေ့တဲ့ဘ၀ခရီးကို ဖြတ်သန်းရမလား၊ အသိဥာဏ်နဲ့ ဘ၀ ရပ်တည်မလား၊ မိုက်မဲတွေဝေမှုတွေနဲ့ ဘ၀ကို ဖရိုဖရဲ ခရီးနှင်သွားမလား ဆိုတာတွေကိုလည်း ဖော်ပြ ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ မည်သည့်ဘာဝကိုမှ မဆန်းစစ်ပါနဲ့ဦး ၊ တစ်တန့်ဘာဝ အနေအထားအရ ဆိုင်ရာဇာတာရှင်အတွက် ပင်ပန်းမလား၊ သက်သာမလား၊ ဥာဏ်ရည်ကို အသုံးချနိုင်စွမ်း အနေအထား ၊ ကောင်းသောပံ့ပိုးမှုများ ရရှိမှု ရှိ/မရှိ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သုခ/ဒုက္ခ အဖုံဖုံ ၊ ဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့မှုအနေအထားအ၀၀ စသည်ဖြင့် မြောက်များ လှစွာသော အချင်းအရာတွေကို တစ်တန့်ဘာဝ အနေအထားကို စတင် ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီး ပုံကြမ်းလောင်း ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်ပဲလား …. ။ မကသေး ။
တနုဘာဝဟာ ..နားမှာ ဆင်မြန်းတဲ့ရတနာ (နားဆွဲ) စသည်တို့ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် အခြေအနေ ကောင်း/မကောင်း၊ သောတအာရုံခံစားရမှု အခြေအနေ၊ (သည်နေရာမှာ အချို့သော ပညာရှင်တို့က သုံးတန့်ဘာဝ အနေအထား တစ်ချက်ထဲနဲ့သာ သောတအာရုံနဲ့ နားအခြေအနေကို ဆုံးဖြတ်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အယူအဆအားဖြင့် တနုဘာဝကိုလည်း သုံးသပ်ကြည့်တာက ပိုမို ညီညွတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ လဂ်မှာ စနေပူးယှဉ်ထားပြီး ရာသီအရ လည်း ရန်ရာသီ ဖြစ်နေခဲ့ရင် သောတ အာရုံခံစားမှုမှာ ကန့်သတ်ထားခံရမှုကို ဖြစ်ပွားလာစေပါတယ်။ အလားတူပဲ မနှစ်မြို့စရာ သောတ အာရုံ တွေကို အဆိုပါအခြေအနေကနေ တိုက်တွန်း လှုံ့ဆော်ပေးတာ မကြာမကြာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။)
သုံးတန့်ဘာဝ တနည်းအားဖြင့် သဟဇဘာဝကနေ ထောက်ဆတွက်ယူရင် ဆယ့်တစ်တန့်မြောက် ဘာဝဖြစ်တဲ့ တနုဘာဝမှာ ပါပဂြိုဟ်များ ရပ်တည်ထားခြင်းဟာ နားပူစရာအခြေအနေနဲ့ နားမှာ ဥပဒ် ပေးခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့ ယူဆခဲ့မိတဲ့အတွက် ယင်းတို့ကို သတိပြုလေ့လာခဲ့ရာမှာ လက်တွေ့ပိုင်း အားဖြင့်လည်း တိုက်ဆိုင်ညီညွတ်မှု ရှိခဲ့တဲ့အတွက် သတိပြုလေ့လာသင့်ကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သော နားနှင့်ဆိုင်သော အကျိုးအပြစ်တို့ကို တနုဘာဝက လွှမ်းမိုးထားတယ် လို့ ယူဆ နိုင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော အချင်းအရာ အချက်အလက်များစွာသည်လည်း တနုဘာဝနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။
ဘာဝ နှင့် ၀ါသနာ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀ါသနာ ဆိုတာကို နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာမှာ လေးတန့်ဘာဝနဲ့ ယှဉ်တွဲဆုံးဖြတ် ကြည့်ရာမှာ အထူး တိုက်ဆိုင်ညီညွတ်လှပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ၀ါသနာဆိုတာကလည်း နှစ်လိုသော အချင်းအရာ လို့ အမှန်အားဖြင့် အနက်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လေးတန့်ဘာဝဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နှလုံး တောင့်တချက်တွေ၊ လိုလားဆန္ဒတွေ ၊ နှစ်လိုတောင့်တမှုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ဘာကို လိုလားမလဲ ၊ ဘာကိုတောင့်တမလဲ ၊ ဘ၀မှာ သူဘာလိုချင်နေသလဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တော့ လေးတန့်ဘာဝကို မဖြစ်မနေ အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့် လေးတန့်ဘာဝမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ် ရပ်တည်နေခြင်းဟာ … စွန့်စားမှုကို မြတ်နိုးခြင်း နဲ့ အရဲကိုးလိုမှု စိတ်အခြေခံ သဘာဝကို ဖြစ်တည်လာစေပါတယ်။ လေးတန့်ဘာဝမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ် ရပ်တည် နေသော ဇာတာရှင်တွေဟာ အမှန်ကိုပဲ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ ကတည်းက ..လက်ရဲဇက်ရဲ လေးတွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ စတန့်ထွင်တာ ၊ ရန်လိုတာ ၊ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် လုပ်တတ်တာ၊ ဆန္ဒစောအမှားတွေ ပြုမိတာ၊ အရာရာမှာ စိတ်မြန်လက်မြန် လုပ်လိုတာ မျိုးတွေ ဖြစ်လာပါမယ်။ အကယ်၍ ဒီအခြေအနေမှာ အင်္ဂါနဲ့အတူ ရာဟုပါ ပူးယှဉ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူရဲ့ စွန့်စားလိုမှုတွေကို သူကိုယ်တိုင် ဖုံးကွယ်ကာကွယ်မှု ၊ တနည်း အားဖြင့် မသိအောင် စွန့်စားလိုမှု ၊ လျှို့ဝှက်စွာ စွန့်စားလိုမှု ၀ါသနာမျိုး ဧကန် စွဲကပ်လာစေပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်း၊ သူလျှိုလုပ်ငန်း၊ စွန့်စားပြီး မှောင်ခို လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လိုမှု ၀ါသနာမျိုးဟာ အဆိုပါအခြေအနေမျိုးမှာ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်တည်လာပါတယ်။
အကယ်လို့များ ...လေးတန့်ဘာဝမှာ ရှိနေတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ ဆယ့်နှစ်တန့်သခင်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် (ဓနုလဂ် နဲ့ ပြိဿလဂ် မျိုးတွေမှာ) သချာင်္ပညာရဲ့ နက်ရှိုင်းမှုတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အလွန် ၀ါသနာထုံ လာတတ်ပြီး၊ ဥာဏ်စမ်းတွေ ၊ ခေါင်းစားရမယ့် ပုစ္ဆာ တွေနဲ့ ကလေးဘ၀ကတည်းက လုံးထွေးနေ ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးဘ၀ ကတည်းက အဆုံးမဲ့ သချာင်္ သဘောကို စိတ်အလွန်ဝင်စားလာတတ်ပြီး ၊ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့အတွက် အချက် မှန်သမျှကို လေ့လာလိုစိတ် ဖြစ်တည်လာစေပါတယ်။ အရွယ်ရချိန်မှာတော့ ..ဂြိုဟ်တွေ တာရာတွေ နက္ခတ်တွေ ကို စူးစမ်းလိုစိတ် ပြင်းထန်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အဲ……အကယ်လို့များပေါ့လေ လေးတန့်ဘာဝမှာ တနင်္လာဂြိုဟ်လို ..ဂြိုဟ်ပေါ့ပါး လေးများ ရပ်တည် ခဲ့ရင်တော့….ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ၀ါသနာ ထုံလာနိုင်ပြီး၊ စိတ်ကူးယဉ်နေတတ် သူမျိုး ဖြစ်လာပါမယ်။ အရွယ်ကြီးလာသည်အထိတိုင်အောင် ကလေးကလား ၀ါသနာမျိုးလေးတွေပါ စွဲကပ် နေတတ်သော အနေအထားတစ်ရပ် ဖြစ်တည်လာစေပါတယ်။
ဆိုရရင်တော့ လေးတန့်ဘာဝ နဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်လိုလားပျော်မွေ့ရာ သဘောတရားဟာ အမှန်ကို ဆက်သွယ်နေတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အပြစ် ပေး ခံရခြင်း နှင့် ဘာဝ သဘောတရား
ဇာတာတစ်စောင်မှာ …ဆယ့်နှစ်တန့်ဘာဝလို့ ခေါ်ဆိုတဲ့ ဗျာယဘာဝဟာ အပြစ်ပေးခံရမှုများနဲ့ သက်ဆိုင ပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ဆယ့်နှစ်တန့်ဘာဝ ဟာ … စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထားသိုရာ၊ အမှိုက်ပုံ၊ နောက်ဖေး ခြံစည်းရိုး ၀န်းကျင်၊ ရေဆိုးထုတ်ပေါက် နဲ့ အိမ်သာ ..စသည်တို့ကို ဖော်ပြပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်တော့ မလိုလားတော့သဖြင့် စွန့်ပစ်ရမည့် အချင်းအရာတွေကို ဆယ့်နှစ်တန့််ဘာဝက လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ အဲဒီ့လိုပါပဲ ပမာပြုရရင် ဆိုပါစို့ …။ သစ်သီးငါးလုံး ရှိမယ်။ လေးလုံးက လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် ဖြစ်မယ်။ တစ်လုံးက အနာပါနေမယ် ဆိုရင် ဆယ်နှစ်တန့်ဘာဝက အဆိုပါအနာပါသော တစ်လုံးကို ဆက်စပ် လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ဘာလို့လဲ။ သူက အပြစ်အနာအဆာ ပါနေသော အချင်းအရာများ (တနည်း) စွန့်ပစ်ရမည့် အချင်းအရာများ ကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း လေးတန့်ဘာဝလို ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဘာဝမျိုးမှာ ဆယ့်နှစ်တန့်သခင်ရဲ့ အပြစ်ပေးမှု မကင်းတဲ့အနေအထားမျိုး ဆက်နွယ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျောင်းထုတ်ခံရတာ၊ ကျောင်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်ရာ ရောက်ရှိပြီး အရေးယူ အပြစ်ပေးခံရတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပါပဲ လေးတန့်ကာရကပြုတဲ့ တနင်္လာနဲ့ ဆယ့်နှစ်တန့်ကို ကာရက ပြုတဲ့ စနေဂြိုဟ်တို့ရဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေဟာ ဆိုင်ရာ ဇာတာရှင်တွေကို ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ နဲ့ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပွားလာစေ နိုင်ပါတယ်။ ဆယ့်နှစ်တန့်သခင်ဟာ လဂ် ၊ လဂ်သခင် စသည်တို့နဲ့ အားကောင်းသော ဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိနေပြီး အပြစ်ပေးနိုင်စွမ်းလည်း ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် …ဇာတာရှင်ဟာ သူရဲ့ဘ၀မှာ အများ အပြစ်တင်ခံရသော အခြေအနေတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ အလွန်သေချာလှပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဇာတာတွေမှာသာမက …. နိုင်ငံဇာတာတွေမှာလည်း ဆယ့်နှစ်တန့်ကျရောက်သော ဘာဝဟာ ထိုနိုင်ငံရဲ့ အကျဉ်းထောင် ၊ အကျဉ်းသား ..အပြစ်ပေးခံထားရသူများအပေါ် လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံဇာတာတစ်ခုရဲ့ ဆယ့်တစ်တန့်ဘာဝ မှာ ပါပဂြိုဟ်များ ရပ်တည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ ပါပ ဖိအား ပြင်းထန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်..ထိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အကျဉ်းထောင် ကျိုးပေါက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆယ်နှစ်တန့်မှ ရေတွက်ရင် (အဆိုပါ ဆယ့်တစ်တန့်ဘာဝဟာ) ဆယ့်နှစ်တန့်ဘာဝ ပြန်လည် ကျရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
အပြစ်ပေးခံရခြင်းကို …ဂြိုဟ်အနေနဲ့ သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကတော့ စနေဂြိုဟ်ပဲဖြစ်ပြီး စနေဟာ လဂ်နဲ့လဂ်သခင်ကို မည်သည့် အနေအထားမျိုးဖြစ်သော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် ဆက်နွယ်မှုမျိုး ရှိနေသည်ဖြစ်စေ…… ဆိုင်ရာဇာတာရှင်အတွက် အပြစ်ဒဏ်ခံရစေသော အနေအထားမျိုး ဖြစ်တည်လာစေနိုင်ပါတယ်။
သာမန်အခြေအနေမှာတော့ ….လူသားတွေရဲ့ဇာတာမှာ ကောဇာကောင်းကင်ဂြိုဟ်သွားအရ လဂ်သခင်ဂြိုဟ် ဆယ့်နစ်တန့်ဘာဝမှာ ရောက်ရှိနေချိန်မျိုးဟာ အပြစ်ပေးခံရမှုကို ဖြစ်ပွားစေရန် အခွင့်အလမ်း သာနေသော ကာလများ ဖြစ်လာပါတယ်။ အနဲဆုံးအဆင့် အပြစ်ပြောခံရတာ ၊ အပြစ်တင် ခံရတာမျိုးလေးတွေ မကင်းရတတ်ချိန်ပါပဲ။
ကျေးလက်တောရွာတစ်ခုရဲ့ ဇာတာမှာ ..ဆယ့်နှစ်တန့်ဘာဝဟာ ထိုကျေးရွာရဲ့ တစ်ရွာလုံး အမြင်ကပ်နေတဲ့ ရွာ့ချဉ်ဖတ်တွေအပေါ် အစိုးရပြီး၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ ဇာတာမှာလည်း ဆယ့်နှစ်တန့် ဘာဝ ဆိုတာ ထိုအသင်းအဖွဲ့ထဲက အပြစ်အများဆုံးလုပ်တဲ့ အသင်းသားတွေအပေါ် အစိုးရနေကြောင်း ……ဆိုရင်း….ဖြင့်။
စာကြွင်း/ နက္ခတ်ဗေဒင်သမား မဟုတ်သော ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ၊ ရေးနေကြ အတွေးစုဗူး စာစုများ အတွက် ရေးလက်စ တစ်ပိုင်းတစ်စ ဆောင်းပါးထဲကနေ ဘာဝများအကြောင်း တွေးမိသမျှကို သီးသန့်ခွဲထုတ်ပြီး လက်ဆော့ ရေးသားလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာမှာ စာဖတ်သမားမျှသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မှားယွင်း ချွတ်ချော် လိုအပ်သည်များ ရှိခဲ့သော် အကြင်ပညာရှိ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်တို့သည် မေတ္တာဖြင့် သည်းခံတော် မူကြပါလေကုန်။
phone – 01 618 469